Alan Shearer Oo Doortay Salah & De Bruyne Midka U Qalma Xidiga Sanadka Ee Premier League
HomeAfricaWararka Somaliga AhAlan Shearer Oo Doortay Salah & De Bruyne Midka U Qalma Xidiga Sanadka Ee Premier League
Gool dhaliyihii hore ee xulka qaranka England Alan Shearer ayaa aaminsan in laacibka xulka Masaarida ee Mohamed Salah uu u qalmo in Kevin De Bruyne uu kaga guuleysto abaal marinta xidiga sanadka ee Premier League.
Labada laacib ee Salah iyo De Bruyne ayaa soo ka soo muuqday musharixiinta u taagan hanashada abaal marinta xidiga sanadka ee horyaalka England, waxaana wehliya ciyaartooyda Harry Kane, David De Gea, David Silva iyo Leroy Sane.
Weeraryahanka heerka caalami ee Masaarida Mohamed Salah ayaa xagaagii la soo dhaafay Liverpool kaga soo dhaqaaqay kooxda reer Talyaani ee Rome,Reds ayuuna xili ciyaareedkan u dhaliyay 30 gool ciyaaraha horyaalka.
25 jirkan ayaa muhiim xili ciyaareedkan ka ah Anfield, waana gool dhaliyaha koowaad ee kooxda Jurgen Klopp oo meel sare sanadkan ka gaartay Champions League.
Sidoo kale Kevin De Bruyne ayaa bandhig heer caalami ah sanadkan garoomada la soo galay,waxaana uu dhaliyay 12 gool isagoo caawiyay 19 gool oo kooxdiisa ay dhalisay.
Ciyaaryahanka xulka Belgium ayaa qeyb ka ah safkii Manchester City ee ku guuleystay horyaalka Premier League,laakiin wali Alan Shearer ayaa aaminsan in Salah uu yahay midka koowaad ee u qalma ku guuleysiga ciyaaryahanka sanadkan ee horyaalka England.
“Qofna ma fileyn in Salah uu noqon doono qaabka hada uu ku jiro markii uu Rome kaga soo dhaqaaqay Reds”.Shearer ayaa sidaasi u sheegay The Sun.
“Waxaaa jiray in dadka qaar ay aaminsanaayeen in uusan u qalmin Salah 34 Milyan,sababtoo waxay dib u raaceen sida uu Chelse ugu fashilmay,laakiin markan waxa uu heli doonaa codkeyga ku aadan xidiga sanadka ee Premier League”.
“Waxa kaliya ee aan ka dhursugayay waxay ahayd kulankii Manchester City iyo Liverpool,laakiin waxaan ogaaday xaqiiqda”.